सिंहदरबारबाट बिदा भए प्रधानमन्त्री ओली « KhabarBiz
सिंहदरबारबाट बिदा भए प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन्डै साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर आजबाट सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन्।
उनले बिदा हुनुअघि आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएसँगै ओली बाहिरएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुसंग जनादेश भएपनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण सरकारको जिम्मेबारीबाट विदा लिएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन लाई पुनस्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्न परमादेश जारी गरेपछि मंगलबार सिंहदरबारबाट विदाई सम्बोधन गर्दे उहाँले जनादेश आफुसंग भएपनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण बाहिरीनु परेको बताउनुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो “आज फेरि जनताको जनादेशले होइन सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट विदा लिदै छु। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो। सर्वोच्च को परमादेश शेरबहादुर देउवा जीको पक्षमा भयो।”
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला आफुहरुको विरुद्ध र संबैधानिक हिसाबले अनुचित भएपनि संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्धामा आधारित भएर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसलाहरु गरिएका छन् तीनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलिय राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछन्। लोकतन्त्रको रक्षा विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरु सहयोगी रहे कि असहयोगी? यीनले राजनीतिक स्थायीत्वलाई बल पुराए कि क्षति? यसबाट दलिय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर? समग्रमा राजनीतिलाई यो फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए? यसको समिक्षा भविष्यले गर्नेछ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यीनको औचित्यबारे अग्नि परीक्षा लिदै जाने छ। तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।”
आफुहरुको चासो र चिन्ता संविधानको रक्षा र सुदृढीकरणमा तथा बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्य प्रति भएको भन्दै उहाँले फैसलाका कतिपय भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने लाई चिन्तित बनाएको बताउनुभयो।
उहाँले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर दलिय प्रणालीको आधाभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशा तर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने तर्फ आफुहरु गम्भीर र चिन्तित भएको बताउनुभयो।
लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंग बीचको सन्तुलन सर्वोच्चको फैसला संगै नराम्रोसंग खलबलिन पुगेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो।
फैसलाले क्षणिक रुपमा कसैलाई खुसी र हर्स दिएपनि लोकतन्त्रको मुल्यमा प्राप्त विजय क्षण भंगुर र अर्थहिन हुदैजाने दाबी उहाँले गर्नुभयो।
उहाँले राजनीतिक कुराहरुको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेबारी दलहरुको भएको भन्दै त्यसमा न्यायलयले हात हाल्दा जोखिम निम्तने टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “ राजनीतिक कुराहरुको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेबारी दलहरुको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएको मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमताको अपेक्षा गरिन्छ । अत्याधिक न्यायीक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर (अझै कहिले कहिले त सन्र्दभ नै नभएका माग नै नगरिएका विषयहरुसम्म अगाडि बढेर) न गन्तव्यमा पुग्न नसकिन्छ न त त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामर्थ यस्तो निकायमा हुने हुन्छ । खेल खेल्ने जिम्मेबारी खेलाडीहरुको हो। तर रेफ्रि स्वयम्मा गोल गर्ने वा खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ।”
आफ्ना विरुद्ध विभिन्न हल्ला फैलाईएको भन्दै उहाँले आफुले अनुचित र अराजनितिक हतकण्डा अपनाएर केही नगर्ने स्पष्ट पानुभयो।
उहाँले लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको मान्छेमाथि नै कन्सिट्युसनल मोरालिटीको प्रश्न उठाईएको गुनासो पनि गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “कन्सिट्युसनल मोरालिटीको कुरा म माथि उठाईयो। कन्सिट्युसनल मोरालिटीको मापदण्ड कुन चाहीँ न्याय निरुपणको लागि म माथि कन्सिट्युसनल मोरालिटीको कुरा उठाएको हो मलाई नै थाहा छैन। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, विकास, सुसासन, सामाजिक न्याय र समानजता सहितको सम्मृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सकियोस् भन्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ। इमान्दार अठोट चाहिन्छ। त्यो बाहेक मेरो मनमष्तिस्कमा कहिलेही पनि केही रहेन।”
उहाँले लोकतन्त्रविरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र गरिएकाले आफुलाई समयमै निर्वाचन हुनेमा पनि शंका लागेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “एउटा गम्भीर षडयन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध भईरहेको छ। राष्ट्रि«य एकताको आश्यकता थियो। विकास निर्माणमा एकताको आवश्यकता थियो। हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने। पछिसम्म कालान्तर सम्म सम्झिईने छ। यसको समिक्षा देशले गर्नेछ। कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला। आजको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई सवल बनाउदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो। आजको राजनीतिक विपरित दिशामा लान खोजिदै छ। बाँकी अवधि संसद चलोस्। समयमा निर्वाचन होस् तर मलाई शंका छ।”
उहाँले बर्तमान सरकारले देश र देशबासीको हितमा काम गरेकाले ढलाईएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “नेकपा एमालेको सरकार ढलाईयो। किन ढलाईयो। यो सरकारले देशको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा दृढताका साथ कम गर्यो। अरु त कुनै कारण छैन। जनताकोबीचमा जान आँट नहुने। अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त? करेसाबारीको झगडा हो यो? गजब छ बा। प्रधानमन्त्री हटाईयो। प्रधानन्त्री तोकियो। इतिहासको कडीमा परिक्षित हुन त बाँकी नै छ।”
उहाँले पार्टी भित्रैबाट आफुलाई असहयोग भएको र अपवित्र गठबन्धन बनाई सरकार ढाल्ने खेल भएको र तीनै क्रियाकलापका कारण मुलुक वर्तमान अवस्थामा आईपुगेको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “सरकार ढाल्न बाहिरबाट प्रयास भयो र अपवित्र गठबन्धन गराईयो, नेकपा एमालेको पार्टी फुटाईयो। कहिलेही तृप्त नहुने महत्वकाक्षाले पार्टी भित्र भयंकर अस्वस्थता पैदा भयो। निर्वाचित नेतालाई दलको नेताबाट हटाउने र अध्यक्षबाट हटाउने काम भयो। आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सरकाको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने अनुशासन हिन र अराजक कामहरु भए । पार्टीमा अन्तरघात गर्ने, आफु गोल रक्षक हुनुपर्नेमा पोष्ट खाली गरिदिन्छ। यस्ता क्रियाकलापका कारण देश आजको अवस्थामा पुगेको हो।”
उहाँले अदालतको फैसला पछि आफु सरकारबाट बाहिरीए पनि लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणकाको पक्षा खबरदारी गरिरहने बताउनुभयो । संविधानलाई संकट तिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध चट्टान भएर उभिने भन्दै उहाँले केही समयका लागि देखिएको बादललाई हटाउदै सुर्य उदाउने उद्घोष गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “ लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि हामी २४ सै घण्टा सजग भएर अब पनि खडा हुनेछौ । थालिएका अग्रगामी कदमहरुको निरन्तरताका लागि खबरदारी गरिरहनेछौ । मुलुकलाई अस्थिरतातिर, अर्थतन्त्रलाई ओरालोदिशातिर, जनतालाई अन्धकारतिर र संविधानलाई संकट तिर धकेल्ने प्रयासका विरुद्ध हामी चट्टान भएर उभिनेछौ । मेरो पुर्ण विश्वास छ मुलुकले सुरु गरेको अग्रगमनको यात्रा कसैले पनि विथोल्न सक्नेछैन र हामी त्यो विथोल्न दिने पनि छैनौ । वादलले एकछिन अध्याँरो पार्न सक्ला घामलाई छेक्न सक्ला तर सुर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निष्तेज पार्न सक्क्तैन । नेपाललाई सम्मृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने महान अभियानमा म र मेरो पार्टी सधैभरी अग्रमोर्चामा डटीरहनेछौ । एकछिन बादल लागेको छ । फेरी सुर्य बादल हटाएर उदाउने छ।”
उहाँले कोभिड १९ विरुद्धको खोपको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी दिदै प्रतिकुल अवस्थामा पनि सरकारले महामारी विरुद्ध प्रभावकारी लडाई गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “….हुन त भोली देखि भनिने छ कि, ल्याईदिएको खोप लगाएर ,अघिल्लो सरकार गयो हामीले खोप दिन थाल्यौ भनेर तमासा सुरु हुनेछ । मलाई प्रचारको कम्पिटिसन गर्नु छैन।”
सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको रक्षा र सुसासनका क्षेत्रमा दुरगामी महत्वका काम सम्पन्न गरेको तथा संघीयतालाई संस्थागत र सुदृढीकरण गरेको बताउनुभयो।
उहाँले सिके राउत र विप्लबसंग भएको सहमति सम्भौतालाई पनि सरकारको महत्वपुर्ण उपलब्धिको रुपमा रहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले संविधानसंग असहमत सबै समुह संविधानको समर्थनमा आइसकेको बताउनुभयो।
बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहत वितरणमा पनि सरकारले उल्लेखनिय काम गरेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो।